Suuqa Bakaaraha oo xiran - BBC Somali
Image caption Suuqa Bakaaraha ee Muqdisho ayaa xiran laba maalin.
Suuqa ugu weyn Soomaaliya ee Bakaaraha ayaa xiran maalintii labaad iyadoo qaybaha kala duwan ee suuqa uu saameeyay shaqo joojin ay ku dhaqaaqeen ganacsatada.
Ganacsatada ayaa ka cabanaya canshuuro dheeraad ah oo ay sheegeen in lagu soo rogay ganacsigooda, waxa ayna ku doodayaan in cashuurta ay bixiyaan balse lacago kale oo ay ku tilmaameen sharci daro in lagu soo rogoy ganacsigooda.
Wasiiru dawlaha wasaaradda maaliyada Cabdulaahi Axmed Nuur oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay iney soo gaartay cabashada ganacsatada, isla markaana aanay ogayn lacagaha ay ka cabanayaan cidda ku soo rogtay. Wuxuu sheegay in sida ugu dhakhsiyaha badan ay wax uga qabanayaan cabashada ganacsatada.